Liiska Ciyaartoyda Liverpool La soo Saxiixan karto
1. Lorenzo Insigne (Napoli) – 2.8
Liiska ciyaartoyda Liverpool suuqa ka doonaysaa waa kuwo kooban balse ay suurtogal tahay in ay Klopp uu samayn karo kala xulasho cida uu kooxdiisa ku soo xoojinayo.
Xidiga kooxda Napoli ee Lorenzo Insigne ayaa ka mid ah xidigaha Reds lala xidhiidhinayo iyada oo dhawaan uu wargayska Corriere dello Sport sheegay in Liverpool ay si xoogan u xiisanaysay saxiixa xidigan.
Heshiiska Insigne ee Napoli ayaa dhacaya 2022 wuxuuna madax waynaha Napoli ee Aurelio De Laurentiis uu qirtay in ay suurtogal tahay in aanu kabtankiisa kooxda ku sii hayn karin.
2. Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain) – 3.0
Liverpool waxay ka mid ahayd kooxihii lala xidhiidhinayay xidiga sida xorta ah PSG dhawaan kaga dhaqaaqi doona ee Adrien Rabiot wuxuuna noqon karaa xidig khadka dhexe ah oo uu Klopp doorashooyin kale uu ku samayn karo.
3. Isco (Real Madrid) – 3.1
Liverpool ayaa marar hore xiiso u muujisay xidiga kooxda Real Madrid ee Isco wuxuuna ka mid yahay liiska ciyaartoyda ay Madrid doonayso in ay lacag ka samayso xili suuqan.
Liverpool ayaa la filayaa in ay haddii ay hesho fursada ay Isco kula soo wareegi karto in uu ka mid noqon karo saxiixyada uu Klopp samayn karo xagaagan.
4. Matthijs de Ligt (Ajax) – 3.4
Klopp ayaa lagula taliyay in uu u dhaqaaqo saxiixa kabtanka kooxda Ajax ee ay kooxaha yurub ugu waa wayni ku tartamayaan si uu u helo lamaane difaac oo ka kooban Van Dijk iyo De Ligt oo isku xulka Holland ah.
Qiimaha ay Ajax ku doonayso De Ligt, mushaarkiisa qaaliga ah iyo tartanka badan ee ay kooxaha yurub ugu jiraan xidigan ayaa hoos u dhigtay fursadii ay Liverpool kula soo saxiixan lahayd De Ligt laakiin wali waxay ka mid tahay kooxaha xaalada qiimaynaya.
5. Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) – 3.5
Xidiga xulka Holland iyo kooxda PSV ee Steven Bergwijn oo 21 sano jir ah ayay ku tartamayaan kooxaha Liverpool, Man United iyo Bayern Munich waana mid ka mid ah saxiixyada uu Klopp samayn karo.
6. Nicolas Pepe (Lille) – 4.0
Xidiga ugu suurtogalsan ee ay Liverpool la soo saxiixan karto xagaagan ayaa ah gool dhaliyaha kooxda Lille iyo xulka Ivory Coast ee Nicolas Pepe kaas oo soo qaatay xili ciyaareed layaableh.
Liverpool ayaa heli karta adeega Pepe waxayna hadda iskugu soo hadheen kooxda Bayern Munich balse waxa uu doonayo ayaa ah in uu boos joogto ah ka helo kooxda uu ku biirayo.
Jurgen Klopp ayaa shaxdiisa u badali kara 4-2-3-1 si uu Nicolas Pepe boos ugu helo taas oo keeni karta in Liverpool ay ku guulaysan karto saxiixa mid ka mid ah ciyaartoydii xili ciayareedkan Yurub ugu fiicnaa.
laakiin liiska ciyaartoyda Liverpool lala xidhiidhinayaa intan oo kaliya kuma koobna balse waa kuwa la filayo in ay ugu suurtogalsan yihiin in ay Reds qaar ka mid ah la soo wareegi karto.